Fanamby ny haavon'ny fizika misy ny zavatra any Laserbreak 3 | Androidsis
Laserbreak 3 dia piozila fizika zavatra tsara hampiasa lojika
Laserbreak 3 dia piozila fizika ahitàna izany lojika izany ihany amin'ny fizika dia afaka mamorona mihoatra ny fotoana manankarena ho an'ireo izay te hihinana kely ny lohany. Midika izany fa tsy maintsy mikendry laser izay afaka mandrehitra kitay isika, mamaky fitaratra amin'ireo zavatra mihetsika ary andian-lozika hafa ampiasaina hitazomana ny fahalianana amin'ny fotoana rehetra.
Lojika izay miaina amin'ny ambaratonga tsirairay namboarina tamin'ny tanana avy amin'ny developer ary efa eo amin'ny fizarana fahatelo amin'ity saga puzzle ity izy ireo. Lalao iray ahitan'ny mpanao asa-tanana ny fahaiza-manao amin'ny fotoana rehetra ary manome azy ny hatsarany hamaha ny ankamantatra tsirairay avy. Ataovy.
1 Ny lojika ao amin'ny mekanika an'ity ankamantatra ity
2 Fihetsiketsehana sasany ao amin'ny Laserbreak 3
3 Milalao Laserbreak 3 ivelan'ny Internet
Ny lojika ao amin'ny mekanika an'ity ankamantatra ity
Laserbreak 3 mitondra antsika amin'ny a tolo-kevitra mahaliana izay ananantsika andianà piozila kintana milina maivana tamin'ny laser. Ity milina ity dia afaka manodina ny hazavan'ny laser-ny mba hamokarana vokany hafa arakaraka ny toerana nanondroany azy.
Amin'ny maha jiro laser anao, ity miteraka hafanana mahery ao anaty ala, izay nampihatra nandritra ny segondra vitsy dia miteraka afo ka mandany ny kitay ao anaty boaty eo imasontsika. Ity dia iray amin'ireo ohatra fizika zava-misy hita amin'ity lalao ankamantatra antsoina hoe Laserbreak 3 ity.
Amin'izay fotoana izay tantaninay tsara ny fiadiana tamin'ny laser, azontsika ampiasaina mihitsy aza ny fitaratra ankehitriny eo amin'ny haavo mba hita taratra ny hazavan'ny laser ary afaka mahatratra ireo singa hafa tsy maintsy ampodinintsika isika. Tahaka ny ananantsika baolina vy eo ambony latabatra ary amin'ny laser isika dia afaka mamaky ka milatsaka amin'ny vera ary miteraka iray hafa ity hetsika ity.
Fihetsiketsehana sasany ao amin'ny Laserbreak 3
Ireo fihetsika voafatotra ireo dia hamokatra vokatra isan-karazany miaraka amin'ny tanjona hamita ny haavony ary handeha amin'ny fanamby manaraka. Raha ampianay ireo singa ara-batana maro karazana toy ny vavahady, afo, andriamby, ranomandry, hazo, TNT, fitaratra ary maro hafa, dia azontsika atao fa ho lasa sarotra kokoa ny haavony mba hahafahantsika mamaha ny lojika.
Ny lojika tsy maintsy atao voafatotra rojo vy hamokarana vokatra hafa, ka mahareta amin'ireo ambaratonga izay hatrizay dia hametraka fanamby aminao. Raha atambatra dia manana ny ambaratonga 47 isika ary na dia toa vitsy aza izy ireo dia afaka manome toky anao izahay fa ampy izy ireo noho ny "asa-tanana" napetraka tao amin'izy ireo tsirairay avy.
Azontsika atao ihany koa ny manitsy ny masontsivana sasany momba izany fizika ny zavatra ampiharina amin'ny singa sasany. ny hafainganam-pandehan'ny laser, ny vokatry ny feo na koa ny mozika; Tandremo ny hafainganam-pandehan'ny laser satria tsy haharitra ela ny fametrahana effets sasany ary avelany handeha haingana kokoa amin'ny ambaratonga sasany isika.
Milalao Laserbreak 3 ivelan'ny Internet
Laserbreak 3 dia fanamby feno an'io fizika zavatra io Saika toa zavatra avy any amin'ny laboratoara mpahay siansa mpikaroka. Ny haitraitra tsirairay avy ary tokony hampiaretanay ny tenantsika amin'ny faharetana ilaina hahitana ny fomba hahavitantsika azy.
Lalao mifototra amin'ny fizika ary mitondra tena araka ny tokony ho izy. Tsy nahita lesoka tamin'ity lafiny ity izahay, ary eny marina fa ny famolavolana ny menus dia mety ho maoderina kokoa; na dia manome azy aza io mpanao asa tanana io izay aleony mifantoka amin'ny fototry ny lalao ary tsy iza izany fa ny fizika ampiharina amin'ny singa sasany.
Tsy mila midina fotsiny ianao izao ary andramo ny Laserbreak 3 sy ny fizika misy azy amin'ny zavatra azonao eo am-pikarohana bokotra iray amin'ny efijery. Lalao iray tena mahaliana ary mamporisika anao izahay manandrana mankafy an'ireto singa ireto. nitranga nataon'i Early Worm hahafantarana ny fizika ihany koa.
Ny haavony vita tanana dia fanamby madio ho an'ny sainao.
Ny haavony dia toa zavatra avy amin'ny laboratoara fikarohana
Fizika fizika voajanahary voajanahary vokany
Fialamboly amin'ny fampiasana lohanao
Mety ho tsara kokoa ny menus
LASERBREAK 3 - piozila fizika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Laserbreak 3 dia piozila fizika zavatra tsara hampiasa lojika
AniWeather dia fampiharana toetrandro vaovao tsotra sy mahafinaritra